Waa maxay iyo sidee ayaa loo sameeyaa cyclogenesis qarxa | Saadaasha Shabakadda
Intii lagu guda jirey dhowr jiilaal waxaa na soo maray duufaano aad u xoog badan oo waxyeelo ba'an u geystey dalkeenna. Khubarada saadaasha hawada ayaa ku dhawaaqay nuucaan oo kale duufaano sida walxaha qarxa ee loo yaqaan 'cyclogenesis'. Si kastaba ha noqotee, ma naqaannaa waxa loo yaqaan 'cyclogenesis'? Maxay ku tiirsan tahay hadday tahay "wax qarxa"?
Qodobkaan waxaad ku baran kartaa wax walba oo ku saabsan cyclogenesis. Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska 🙂
1 Waa maxay cyclogenesis qarxa?
3 Guudmarka iyo saadaasha
4 Qaar ka mid ah ifafaalooyin la mid ah
Waa maxay cyclogenesis qarxa?
Si loo fahmo fikraddan, waa inaan marka hore ogaanno waxa ay yihiin duufaannadu. Kuwani waa aagagga cadaadiska hooseeya halkaasoo ay dabayshu u wareegeyso saacad-gees gees gees waqooyiga. Ku dhowaad dhammaan isku dhacyada ama niyadjabka waxay maraan nooc ka mid ah cyclogenesis inta lagu jiro samaysankooda iyo horumarkooda. Gobolladooda ugu horreeya, waxay ku samaysan yihiin qaab-dhismeed mowjado leh nidaamyo hore oo qabow, diiran iyo qarsoodi ah. Qiimaha ugu yar ee cadaadiska cimilada ayaa hoos udhaca inta lagu gudajiro qeybtiisa koowaad ee meertada noloshiisa.
Asal ahaan cyclogenesis qarxa waa sameynta duufaan si dhakhso leh oo xoog leh. Taasi waa, hoos u dhac ku yimaada cadaadiska dusha sare waqti yar gudahood. Tani waxay isu rogeysaa isku dhac aad u xoog badan saacado gudahood. Ereyga guud ee loo isticmaalo niyad jabkan aadka u degdega ah waa "saadaasha hawada".
In cyclogenesis qarxa cadaadiska Hawada wuxuu hoos u dhacaa qiyaastii 24 mb kabadan ama kayar. Badanaa waxay ku dhacdaa meelaha dhaadheer ee u dhexeeya 55 iyo 60 digrii. Tani waa sababta oo ah hababka loo yaqaan 'cyclogenesis' waxaa saameyn ku leh wareegga Dunida. Waxay badanaa ka dhacaan badweynta Atlantic iyo Pacific.
Faahfaahinta sameynta cyclogenesis ee cabirka noocan ah ma fududa in laga jawaabo. Waxay kuxirantahay loolka. Si loo soo saaro bambaano heerkan ah, duufaan si wanaagsan ula falgalaysa mid kale oo heerar sare ah waa inay si wada jir ah ugu wada noolaadaan waqti isku mid ah. Waa inay ku jiraan masaafo ku filan sidaa darteedna dhexdooda uu ka sii ballaadho ama u weynaado nidaamka niyad-jabka muddo gaaban.
Dadbadan Badanaa waxay isku qaldaan cyclogenesis qarxa oo ay la socdaan duufaan ama duufaan. Iyagu waxba kuma laha. Cyclogenesis kaliya wuxuu ku dhacaa bartamaha latitude-ka mana jecla sida duufaanada kuleylaha. In kasta oo ay leedahay magaca saxda ah ee filim, maahan duufaan hagaagsan sida ay yiraahdaan.
Isbaanishka way ka dhaceen dhowr jeer inkasta oo ay dhif ku yihiin cirka dhulkayaga. Waxaa loogu yeedhi karaa duufaan qoto dheer oo aad ku fahmi karto dhaqsaha badan, maaddaama dabayluhu aad u kacsan yihiin oo dabaylaha duufaanku ku dhow yihiin. Duufaanta baddu way ka halis badan tahay duufaanta caadiga ah, sidaa darteed waxay badanaa keentaa cawaaqib xumo. Ereyga qarxis ayaa lagu daray maadaama ay ka turjumeyso inuu aad u qoto dheer yahay.
Guudmarka iyo saadaasha
Waxaa jira xoogaa farqi ah oo udhaxeeya duufaanada oo maraya geedi socodka qoto dheer iyo xoojinta dhacdadan. Tani waa sababta oo ah xoojinta tani waa mid tartiib tartiib ah oo aan si dhakhso leh u socon. In cyclogenesis-ka qarxa, firfircoonida hababka u sameysma si aad ah ayaa loo dardargeliyaa oo loo badiyaa. Si aad u badan, in ay tahay wax aan caadi ahayn saadaasha hawada iyo saameynta ay ku leedahay dusha sare.
Saadaasha hawadda, waxaa lagama maarmaan ah in si kala duwan aan kuugu yeero maaddaama labadaba qaab dhismeedkeeda iyo cawaaqibkeeduba ay kala duwan yihiin. Waxaa lagu kala saaray sidan si loo feejignaado loona soo jiito feejignaanta khalkhalka daran ee duufaanka oo leh astaamo gaar ah.
Sidaa darteed qashin-qarxa waa qeyb ka mid ah iskudhacyo aad u qoto dheer, laakiin maaha sida kale. Sababtoo ah dhacdadan waxay qaadataa saacado kaliya inay dhacdo, aad ayey u adag tahay in la saadaaliyo. Ma jiraan shuruudo horudhac ah oo qofku horay ugu sii ogaan karo sameynta ifafaalahaan.
Guud ahaan, waxyaabaha qarxa ee cyclogenesis ayaa lagu sameeyaa aagagga badda ee aan xog badan laga heli karin. Dhamaan moodooyinka oo dhami si fiican ugama tarjumi karaan xaaladaha. Haddii aad ka bilowdo falanqeyn bilow ah oo khaldan ama cilladaysan, macquul maaha in la saadaaliyo ifafaalahaas. Intaas waxaa sii dheer, moodello lambarro ah oo leh xallin ballaadhan oo ku filan waa in la adeegsadaa. Taasi waa, waa inay noqotaa mid furan oo ku filan in looga shaqeeyo baaxad weyn isla mar ahaantaana gobol ahaan si ifafaale yaryar loo soo saari karo.
Moodooyinka hawlgalka ee awood u leh soo saarista cyclogenesis hore waa dhif iyo naadir. Marka geeddi-socodka qarxa la horumariyo, ku dhowaad dhammaan moodooyinka ayaa ka tarjumaya.
Qaar ka mid ah ifafaalooyin la mid ah
Waxaa jira ifafaalooyin saadaasha hawada oo la mid ah cyclogenesis qarxa. Midkood wuxuu ahaa kiiska Gordon sanadkii 2006. Waxaa jiray dabaylo aad u xoog badan oo ku dhuftay Galicia iyo Delta. Si kastaba ha noqotee, iyagu ma aysan ahayn cyclogenesis sida loo maleynayo. Jawiga dhexdiisa waxaa jira xaalado badan oo siyaabo kala duwan u dhaliya dabaylo iyo duufaanno xoog leh: min baaxad yar (duufaano) ilaa baaxad weyn (duufaanno iyo duufaanno qarxa). Muuqaalkan ballaadhan ama xaaladaha kala duwan ayaa ku siin kara dabaylo aad u xun.
Xaaladdan oo kale, dabaylahaasi waxay ahaayeen duufaan 3aad ah markay aad uga fogaayeen jasiiradda. Markay duufaantu ku soo dhowaato dusha sare ee dhulka ayay marba marka ka dambeysa sii daciifaysaa. Kaliya waxay noqotay duufaan kuleyl ah. Markii uu galay Galicia waxaa qabtay qabow weji duufaan ah oo ka baxsan. Taasi waxay ka dhigtay inay tagto waqooyi-galbeed ee gacanka iyada oo aan la marin geeddi-socod la mid ah qaab-dhismeedka walxaha qarxa ee xilli-kasta.
Dhacdo kale oo la mid ah ayaa ahayd markay dhacday duufaantii kuleylka ahayd ee Delta 2005. Dabaylihii xooga badnaa ee duufaantaan wadday way daciifeen inkasta oo aaggu balaadhay. Taasi waa, in kasta oo ay xoogaa itaal yaraayeen, haddana waxay qarxiyeen meelo badan. Goor dambe, waxaa qabsaday qalalaase siyaado ah oo ka bilaabmay jasiiradaha Canary. Saamaynta deegaanka iyo hadalka ayaa dabaylo xoog leh ka dhigtay jasiiradaha qaarkood. Si kastaba xaalku ha u gaadho hawlgal qarax ah. Sababtaas awgeed, ku dhowaad dabeylaha duufaanka wata ama duufaanta aadka u xoogga badan ayaa inta badan lagu jahwareersan yahay cyclogenesis qarxa.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan ay noqotay mid si cad u qeexday habsami u socodka iyo saameynta uu leeyahay cyclogenesis iyo inaan gacan ka geysano sidii loo sixi lahaa kuwa wareersan. Su'aalo kasta oo aad ka hayso arrintaas, ha ka waaban inaad uga tagto faallooyinka. Waxaan kuugu jawaabayaa raaxo 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Waa maxay iyo sidee ayaa loo sameeyaa cyclogenesis qarxa